Guddoomiyaha xukuumadda Galmudug "Waxaan aqoonsanahay dowladda federaalka" - BBC News Somali
Guddoomiyaha xukuumadda Galmudug "Waxaan aqoonsanahay dowladda federaalka"
30 Oktoobar 2018
Madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo baaqa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa gogosha lagu xalinayo khilaafaadka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Arrintan ayaa waxa ay ka hor imanaysaa go'aanadii kasoo baxay shirkii dowlad goboleedyada ee Garoowe, loogana soo horjeedsaday gogosha madaxweynaha, islamarkaasna lagu sii adkeeyay joojintii wada shaqaynta.
Sheekh Shaaki ayaa sidoo kale sheegay in uu aqoonsanyahay dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda.
Wasiirka Amniga ee Galmudug oo ka hadalay weerarka ciidamada
Lama oga in moowqifka Sheekh Shaakir uu waafaqsanyahay madaxweyne Xaaf oo ay hal magaalo wada joogaan, shalayna dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb.
Horey waxaa Galmudug uga dhex jiray khilaaf uu kula qeybsamay maamulka oo hadda kala fadhiya Dhuusamareeb iyo Cadaado, lamana oga waxa ay soo kordhin karto kala aragti duwanaanshaha hadda Dhuusamareeb.
Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca
Sida uu qorey mac-hadka daraasaadka ammaanka ee ISS ee Koonfur Afrika ku yaala, heshiiskii lagu mideeyay Galmudug iyo Ahlu Sunna waxa uu horseeday in dadkii horey saamiga weyn ugu lahaa maamulka Galmudug ay dareemaan in ay luminayaan awoodoodii, sidaas darteedna ay horseedday khilaafka loogu kala jabay Dhuusamareeb iyo Cadaado.
Mac-hadka oo dhanka kale soo xiganay sargaal sare oo ka tirsan urur goboleedka IGAD oo dhexdhexaadinta ka qeybqaatay, ayaa sheegay in xilka Guddoomiyaha Xukuumadda ee Sheekh Shaakir la siiyay uu ahaa aalladdii ugu muhiimsanayd ee dhalisay in guusha laga gaaro wadahadalada, heshiiskana la saxiixdo.
Horey waxaa u jiray heshiisyo lagag gaaray Alhu Sunna oo aanan shaqaynin sababo kala duwan awgood.